Suuraawwan Afriikaa ciccimoo torbee kanaa : Onkoloolessa 20-26, 2017 - BBC News Afaan Oromoo
Suuraawwan Afriikaa ciccimoo torbee kanaa : Onkoloolessa 20-26, 2017
Filannoo suuraalee ciccimoo Afriikaa guutuu fi lammiilee Afriikaa biyyoota addunyaa biroo kessa jiraatanii.
Nagaan ergaa namoota kabaja guyyaa goototaa Keeniyaa 'Mashujaa Day' irratti suuraa ofee ka'an kanaati. Ayyaanichi jimaata darbe Naayiroobiitti kabajame.
Istaadiyeemii Mohaammad 6ffaa Kaasaabilaankaa keessatti Sambata darbe wayita kilabiin Morookoo Wiidaa Kaasaabilaankaa, tapha chaampiyoonsi liigii Afriikaa irratti kilabii Aljer USM mo'ate, deeggartoonni akkanatti gammachuu isaanii ibsatan.
Hojiiwwan lammii Nayijeeriyaa kan ta'e Amedee, Roobii darbe torbee agarsiisa Faashinii fi Diizaayinii Leegoos irratti dhiyaatan, yaadni isaa faashinii naayijeeriyaa fi Afriikaa beeksisuu dha.
Filannoo irraa deebii Keeniyaa irratti deeggartoonni mormitootaa mormii cimaa gaggeessan. Namichi kun Roobii darbe mukukkula qabatee mormii isaa dhageessisaa ture, naannoo Kibeeraa jedhamutti.
Namichi kun ammoo achuma Kibeeraa keessatti dawoo keessaa wal-falmii poolisootaa fi mormitootaa ilaala. Kuni gaafa filannichaa kamisa ture.
Miseensonni waldaa Leegoo Maariyaa Keeniyaa kunneen ammoo gaazii imimmaaniin miidhamanii jiru, Naayiroobii naannoo Mataaree jedhamutti.
Godaantonni Afriikaa hojii barbaadan kunneen Liibiyaa naannoo magaalaa Misraataa daandii qarqara taa'anii hojii eeggataa jiru.
Shamarreen Sudaan kibbaa kun kaampii baqattootaa Niguunyiyeel keessatti kibxata darbe wayita Ambaasaaddarri mootummoota gamtoomanii naannoo Gaambeellaa Itoophiyaa daawwatan kaafamte.
Haadha warraa Neelsan Maandellaa duraanii Girasha Machel fi barreessaan mootummoota gamtoomanii duraanii Kofii Aanaan, taatee 'Mandela Walk' jedhamu Landan, Weestmiinistar keessatti qophaa'e irratti argamanii turan.
Namichi lammii Biriteen Toom Moorgaan jedhamu kun Afriikaa Kibbaatti afuuffeewwan walitti hidhaman 100 oliin kiiloomeetira 25 lafarraa samii keessa ol fagaatee yoo balali'u. Kun Jimaata darbe ture.
Kun ammoo lammiin Afriikaa Kibbaa Maayik Sheelebach, taatee bishaanirra sigigaachuu wiixata darbe magaalaa Keeptaawonitti ta'e irratti dambalii galaanaa meetira shan dheeraturra wayita imalu agarsiisa
Suuraaleen AFP, EPA, PA fi Rooyitars irraa argaman
Suraawwan ciccimoo Afriikaa: Onkololeessa 13-19, 2017